Gbasara Anyị - Hi Promos - Ningbo Hipromos International Trading Co., Ltd.
Nkwado Uwe na Uwe
Uwe mkpuchi nkwado
Obodo Bandan na-akwado
Nkwalite okpu & okpu
Nkwado tụgharịa Flops
Nkwado Auto Ngwa
Nkwado Ice Scrapers
Akpa Nkwado & Ngwa Ngwa
Akpa Business Nkwado
Akpa oyi akpa
Akpa Ngosiputa Ngwa Nkwado
Akpa Drawstring Akpa
Akpa uwe na akpa
Akpa Egwuregwu Nkwado
Nkwado Tote akpa
Akpa Mmanya Nkwado & Ndị Na-ebu Ya
Ihe Nkwado Elektrọnik Nkwado
Nkwado Electronic Ngwa
Banks Ike Banyere & chaja
Nkwado USB Sticks
Anya Nkwado na Elekere
Ahụike Nkwalite & Nke Onwe
Nkwado eze ngwaahịa
Mgbatị Mgbatị & Ahụike
Nlekọta Ahụike Nkwado
Nlekọta Onwe Onye Nkwado
Ihe Nkwado Nchegbu Nkwado
Nkwado Bar & Beverage Ngwa
Onyinye Ezumike Onyinye
Nkwado Home ngwaahịa
Ihe Nkwado Kitchen Ihe
Nkwado Pet ọnọde
Nkwado Ntụrụndụ & N'èzí
Blanket na nkwado
Nkwalite Maa ụlọikwuu & Picnic
Ihe Nkwalite Na-ebutu Mgbasa Ozi
Nkwado Ponchos & Raincoats
Ugogbe anya maka anwụ na ngwa mma
Ihe Nkwado Nkwado
Nkwado Office & sọọsọ
Nkwado Office & sọọsọ Ngwa
Akwụkwọ Nkwado Akwụkwọ
Pọtụfoliyo & Nchekwa Nkwado
Ihe Nkwado ahia ahia
Nkwado Writing Instruments
Ihe Nkwalite Ihe Egwuregwu & Akwụkwọ Ọhụrụ
Egwuregwu & Ihe egwuregwu ụmụaka
Ihe Nkwado Ndị Nkwado
Anyị na-arara na-enye n'elu-klas ngwaahịa na ọrụ nke mmemmem anyị kpọrọ ahịa mụbaa azụmahịa ha e wezụga ha obodo suppliers na mbo mbuli ahịa olu, megide anyị asọmpi ahịa na ihe siri ike mma. Anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị na onye ahịa ọ bụla nwee mmekọrịta dị ogologo oge, nwalee onye ọhụụ ọhụrụ gị na China iji hụ ihe anyị nwere ike imere gị.
Hi Promos hiwere na 2010 na-emepụta kpọọ ihe nkwado na ngwaahịa ngwongwo na Ningbo City, China, na-eme nke ọma na-abụ gị n'elu onye na irè sourcing, free nnyocha nke na-agba ọsọ iwu na unexpensive mbupu amụma. Anyị na-agba onye ọ bụla ọkachamara mkpara na-aga n'ihu mma nke anyị azụmahịa na a pụrụ ịdabere na zuru ọrụ, na-atụ anya ịtụnanya ika mmata na nloghachi.
Anyị bụ ndị otu eto eto amụrụ nwere agụụ, ị ga-enwe obi ụtọ na-arụ ọrụ na anyị kere mkpara.
Onyinye ahia nkwado bụ ụzọ dị mma iji nweta ego iji kpọsaa azụmaahịa, nzukọ ma ọ bụ mmemme, nke enwere ike ịhazi ya na ederede na ogologo oge. Anyị na-arara onwe anyị nyekwuo nka ma na-ele anya iji mụtakwuo banyere ụlọ ọrụ ngwaahịa na-akwado, nke na-enyere ndị mmekọ anyị aka ịgbasa azụmahịa na ihe ndị pụtara ìhè na ihe ndị dị ọnụ ala. Gụnyere akpa nkwado, okpu, ihe elektrọnik, ihe nlekọta ahụike, mpụga & ngwaahịa njem, ịkwụ ụgwọ ụlọ, ihe ncheta, wdg.
Ebumnuche anyị ịbụ naanị onye ibe gị na ọfịs na China iji mee ihe anyị kwesịrị ime dịka onye na-anọchi anya ya ma were ọrụ zuru oke.
Office: ndị ọkachamara oge niile jikọọ na ndị na-emepụta ihe. Gị Office Ebe a!
Mentkwụ ụgwọ: agbanwere dị ka ọnwa ma ọ bụ nkwụnye ego. Ekwela ka ego chebe gị!
Njikwa Ogo: a. 3rd a na-akwụ onye nyocha ndị otu ụgwọ ka ọ nyocha. Àgwà mbụ!
Sourcing: factory kpọmkwem price nkwa. Sachekwa ego!
Gbọ njem: weta oge iji ụzọ mbata dị iche iche, site n'oké osimiri, ikuku, ụgbọ oloko ma ọ bụ site na ozi ndị ozi (DHL, Fedex).
Are dị anyị ezigbo mkpa. Ya mere, anyị na-agba ndị otu anyị ume ka ha rụpụta ọrụ ọsọ ọsọ karị. Dị ka mmekọrịta gị na nke ọma na ogologo oge, anyị ga-eme ihe kachasị mma iji tinye ahụmịhe na ihe ọmụma anyị na-enweghị imebi iwu ọ bụla, n'agbanyeghị agbanyeghị iwu US $ 100 ma ọ bụ iwu US $ 1.000.000.
Pụrụ ịtụkwasị obi & Kwụsie: anyị na-ahụ, na-anụ, na-emetụ ma na-enwe mmetụta nke ọma.
Nkà: onyinye ga-adị njikere na 24hrs ma ọ bụ mee ka ị nweta azịza ziri ezi.
Ka anyi kwuo okwu ugbua. Nhọrọ nke ahaziri iche maka ihe ahaziri iche na ihe nkwalite na China - Mgbalite Nkwalite. Email anyị taa iji rịọ enyemaka.
Rm1705, No.2 Bldg, Shangdong Business Center, Nke 20, Lane 1918, Canghai Rd., Yinzhou District, Ningbo 315041, China